လမင်းခင်: April 2009
Posted by LRDP at 9:21 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 9:38 AM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အစည်းအဝေး
Posted by LRDP at 4:22 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 1:03 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 11:48 PM0comments Links to this post
စစ်တပ်စခန်းရုံး မီးလောင်မှု အလုပ်သမားတွေကို မတရားဖမ်းဆီး
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၈ ရက် မနက်ခင်းက ပဲခူးတိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် အင်းတကော်တပ်ရင်းလက်အောက်ခံ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း ၉၆၃ ရဲ့ မင်းကုန်းရွာအနီးက လမ်းဖောက်လုပ်ရေး စခန်းရုံးတခု မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမီးလောင်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက လမ်းဖောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတွေ ရှို့တာဆိုပြီး အလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးကြည်လှက သူ့အလုပ်သမားတွေ မဆီမဆိုင် အဖမ်းခံရတာဖြစ်ကြောင်း အာအက်ဖ်အေကို ပြောပြပါတယ်။
ဦးကြည်လှ။ ။'ယမ်းတွေထားတယ်တဲ့၊ မိုင်းတွေထားတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့က အလုပ်သမားတွေကို မသွားနဲ့ ပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်လို့။ ဗနာက်ပြီးတော့ မီးရောင်ကြီိးကလည်း တရုံးလုံးလောင်နေတာ။ တခြမ်းကအနီ၊ တခြမ်းက စိမ်းစိမ်းတွေ ပြာပြာတွေ ဖြစ်နေတယ်လေ။ အဲဒါနဲ့ အလုပ်သမားတွေက မသွားရဲဘူး။ တဖက်အမြင်က သူတို့အပြစ်မကျရေးအတွက် ကျနော်တို့ဖက်ကို စောင်းလုပ်လိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်အပါအဝင် ၁၁ ယောက်ကို အဲဒီ လေးအိမ်စုမှာ ထားပစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီက နုံနုံအအ ၁၁ ယောက်ကို ဖောင်ကြီးရဲစခန်းကို ခေါ်သွားတာ။ အကြီးကောင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ အချုပ်ထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ ဇော်လတ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်၊ တကယ့် နုံနုံအအ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ထားလိုက်တာ။ ကျန်တာတွေကို ည တချက်ထိုးလောက်မှာ ပြန်လွှတ်ပေးတယ်။ ၃ဝ ရက်နေ့က အကြီးကောင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို ပြန်လွတ်လိုက်တယ်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချိန်မှာ တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ ဆွဲတာ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်က မီး၊ မီးလို့ အော်တော့မှ ဒီကောင်လေးတွေက ကျနော်တို့နှိုးမှ အိပ်ရာကနိုးတဲ့ ကောင်လေးတွေ။ မတရား သက်သက်မဲ့ကို သူတို့ ဆွဲထားတာ'
ဒီမီးလောင်မှုဟာ စခန်းတာဝန်ရှိတဲ့ စာရေးက ဆီထုတ်ရောင်းရာကနေ လောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးကြည်လှက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဦးကြည်လှ။ ။'အောင်ချိုဦးဆိုတာ အရပ်သားစာရေးလေ။ သူက ဆီတွေဘာတွေလည်း ကိုင်တယ်။ ကားစာရင်းလည်း ကိုင်တယ်။ ဆီကို သူက ညစဉ် ခိုးထုတ်တာ။ အဲဒီညက သူက ဆိုင်ကယ်သမား ကိုရဲထွန်းဆိုတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတဲ့သူကို ၄ နာရီမှာ ဆီ နှစ်ပုံးတင်ချင်လို့ ကိုရဲထွန်းကို လာခဲ့ပါလို့ ကျနော့်ဆိုင်မှာ ချိန်းတယ်။ သူတို့ချိန်းတဲ့ နာရီမှာပဲ မီးကလည်းလောင်တယ်။ ရုံးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် မီးစက်တလုံး၊ ဆီပေပါနှစ်လုံး အပြင်ကို တွန်းထုတ်သွားတယ်၊ အောင်ချိုဦးတို့။ ဒီလူတွေဟာ မီးလောင်တုန်းက မအိပ်သေးလို့ ဒီပစ္စည်း ထုတ်လို့ရတာ။ အဖမ်းခံထားရတဲ့ မောင်ဇော်လတ်ကို အတင်းအကြပ် ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီး ဝန်ခံခိုင်းနေတာကြောင့် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေး ခက်ခဲနေရတယ်'
ဦးကြည်လှတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတပ်ဆီက အလုပ်သမားခငွေ သိန်းသုံးဆယ်လောက်လည်း မရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အာအက်ဖ်အေက သတင်းအပြည့်အစုံ သိနိုင်ဖို့ မောင်ဇော်လတ်အပါအဝင် အလုပ်သမားတွေကို ပထမဆုံးဖမ်းသွားတဲ့ ဖောင်ကြီးရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး။ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အခုလို မတရား အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အတွက် ဘယ်ကို ဆက်တိုင်ရမှန်း မသိတာကြောင့် ပဲခူးမြို့က လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရှေ့နေဦးအေးမြင့်က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
ဦးအေးမြင့်။ ။'တာဝန်ရှိတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီး ဦးစိုးလွင်က သက်ဆိုင်ရာဌာနက တရားစွဲမှာကိုသိတော့ ရာထူးပြုတ်ကျမှာကို ကြောက်လို့ ဘာမှမရှိတဲ့ လုပ်သားလေးကို မီးရှို့ပါတယ်လို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ ဖန်တီးဆွဲတယ်။ ဒါကို ပြည်သူလူထု အားကိုးရမယ့် ရဲစခန်းကလည်း အကာအကွယ် မပေးဘူး။ လှည်းကူးမြို့နယ် တရားသူကြီးကလည်း အကာအကွယ် မပေးဘူး ။ မြို့နယ် ဥပဒေအရာရှိ ဦးလှမြင့်ကလည်း အကာအကွယ် မပေးဘူး။ တပ်ကလည်း ဦးကြည်လှကို ဒီအမှုမှာ မပါပါနဲ့၊ မောင်ဇော်လတ် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ့မယ်လို့ပြောပြီး အမှုထိန်ချန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ လမ်းပြကြယ်က ဥပဒေနဲ့ နည်းလမ်းနဲ့အညီ လုပ်နိုင်အောင်လို့ နည်းလမ်းတော့ ရှာနေပြီ'
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ပဲခူးမြို့က လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအေးမြင့်က သူတို့ ကူညီဆောင်ရွက်မယ့်အကြောင်း ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မီးရှို့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး ဖမ်းခံထားရတဲ့ မောင်ဇော်လတ်ကို အင်းစိန်ထောင်မှာထားပြီး လှည်းကူးတရားရုံးမှာ စွဲချက်မတင်နိုင်သေးပဲ ရုံးထုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
Posted by LRDP at 10:36 PM0comments Links to this post
Sunday, April 26 2009 @ 09:29 PM CDT
Burmese FTUB Delegates Freed after six days concern over conditions of detainment
Saturday, April 25 2009 @ 12:43 AM CDT
AsiaOn 1 April, five activists of the Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) were arrested in their homes in Rangoon, Burma, after attending the first National Congress of the FTUB as delegates. Without explanation and without being formally charged, the five were then released on 11 April following strong protests from the International Trade Union Federation (ITUC) and several other unions. Burmese FTUB Delegates Freed after six days concern over conditions of detainment
On 1 April, five activists of the Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) were arrested in their homes in Rangoon, Burma, after attending the first National Congress of the FTUB as delegates. Without explanation and without being formally charged, the five were then released on 11 April following strong protests from the International Trade Union Federation (ITUC) and several other unions.
Inastatement, the ITUC said it understands that the ILO was involved in the release.
The five included: Zaw Myint Aung,ateacher from South Okkalapa, Rangoon; Soe Oo,atextile factory worker from Shwe Pyi Thar, Rangoon; Maung Tun Nyein, another textile factory worker from Hlaing Thayar, Rangoon; Khine Lin Myat,afemale worker at the UMH Textile factory; and Shwe Yi Nyunt,anurse’s aide and law student, who isamember of FTUB’s Women’s Committee.
FTUB General Secretary Maung Maung
The ITUC’s appeal to global labour expressed the concern that the five may have been tortured while being detained. In its letter to Burmese military junta leader, General Than Shwe, the ITUC called FTUBalegitimate labour organization and said, “This latest act demonstrates once again the determination of the junta to block any form of democratic activity and to clamp down on any form type of dissent from its iron rule.”
FTUB General Secretary Maung Maung said: “The fact that our members were arrested just after returning from participating in the 1st National Congress of the FTUB” speaks for itself. The historic three-day FTUB Congress was held inaborder area inside Burma, and the fact that courageous Burmese trade unionists conducted democratic proceedings inside highly repressive Burma is exemplary, the ICEM believes.
Posted by LRDP at 7:32 PM0comments Links to this post
သတိ -- ပါတီကိုစောင့်ရှောက်ကြရန် ဖောက်ပြန်သူများရန်မှ (ဒုတိယပိုင်း)
ပါတီက လူကြီးတွေ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေအပေါ်တကယ်ပဲ စေတနာနဲ့ အားမလိုအားမရ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေ ပါတီမှအမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။လူကြီးဆိုတော့နှေးတယ် ဆင်ခြင်ထုံတရား
လည်း ကြီးတယ် လူငယ်ဆိုတာ ခြေမြန်လက်မြန်နဲ့တုံးတိုက်တိုက်ကြားကိုက်ကိုက် တိုက်ရဲခိုက်
ရဲကြတယ် ။ ပါတီမှာ ဒီလိုရှိခဲ့တဲ့အခြေခံတွေကိုကြည့်ပြီး တက်ကြွတဲ့လူငယ်ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
တွေ ကတော့ ခံနိုင်ရည်ရောနဂိုကမှရည်ရွယ်ချက် အမှားအယွင်းတွေနဲ့ ဆိုတော့ စောစောရှင်းတာ
အေးပါတယ် လေ လို့ ပဲ ကြေနပ်ရပေမပေါ့ ။။။။
ကျမတို့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်သက်တန်းမှာ လမ်း တ၀က်မှာကျန်သူတွေ သက်လုံမကောင်း
သူတွေ ခိုင်ကြည်တဲ့စိတ်ကင်းသူတွေ ပြတ် -ပြတ် ပြီးကျန်ခဲ့ကြပါပြီ ၁၉၈၈ ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ဟာပြည်
သူတွေရဲ့ရင်မှာ မေ့ဖျောက်လို့ ခုထိမရသေးပါဘူး ။ တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေး ထဲ ကိုပါမလာပဲ သာမာန်
ပြည်သူအဖြစ် သူ့ လူမှုတာဝန် သူထမ်းဆောင်နေသူအဖို့ ကတော့ သူတို့ လုပ်နေတာလည်း နိုင်ငံ့အရေး
ပါပဲ ဒါပေမဲ့ကင်းလွှတ်တယ် - ပေါ့ တော်လှန်ရေး တို့ယုံကြည်ချက် နဲ့ တိုက်ပွဲ ၀င်တယ်တို့ ဆိုပြီး
တိုက်ပွဲ စာရင်းထဲ ကိုယ့်နာမည်သွင်းချင်သူများကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကယိုင်လာတာဖောက်ပြန်ချင်လာ
တာ ပင်ပမ်းလာလို့ငြိမ်းငြိမ်း ပဲ နေချင်တော့တာတွေ ကိုဝန်မခံပဲ အယူအဆ အမြင် သဘောထား
မတူကြတာပါလို့ဥပါယ်တံမျဉ် နဲ့တော်လှန်ရေးတရပ် လုံးကို အသုံးချနေတဲ့စကား ခုနေခါ တော်
တော်များများကြားနေရပါတယ် ။ သတိတော့ရှိဖို့ လိုတယ် ဒါဟာ ဖောက်ပြန်တာနဲ့ တထပ်ထဲ ဆိုတာ
နားလည်ကြည့်မိကြရဲ့လားလို့အဲဒီ့လူတွေကို ကျမ မေးချင်ပါတယ်။
သူများယောင်လို့ အမောင်တောင်မှန်းမြောက်မှန်းမသိတာမျိုး တော့ မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး ။ ယောင်
တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ဖာသာ လွှတ်လပ်စွာပျံသန်းဖို့အတောင်တပ်ချင်ကြတာပါ။ပြည်
သူတွေ ပါတစ်ပါတည်းသယ်ဆောင်နိုင်မဲ့အတွေးတွေ လက်လျော့ လိုက် ကြတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကျမ
ကျမတို့စစ်အုပ်စု အပေါ်ဘယ်အချိန်မှာမှယုံကြည်မှု ပေးရမလဲ ဆိုရင် ပြည့်သူလက်ထဲအမှန်တကယ်
အာဏာရပြီ ပြည်သူ့ အစိုးရအစစ်ဖြစ် ပြီဆို မှ လက်ဆွဲ နုတ်ဆတ်သင့်ရင် နုတ်ဆတ်ရမှာပါ ။ဒါတောင်
ကြီးမားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကန့် သတ်ချက်တွေ နဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု မျိုး ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက် နဲ့ 
မှတိုင်းပြည်မှာနောင် မဖြစ်ပေါ်ရအောင် ကြပ်မတ် ရမှာပါ ။
ကျမ တို့ ထဲ က ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ လေ -- ဦးတင်ထွန်းအောင်တို့ ဦးကြည်ဝင်း တို့ လည်း ဒီ ထဲ က
အခွင့်အလမ်းတွေရပြီး အမတ်ရယ် လို့ ဖြစ်ပြီးမှ အဲဒီ အဆင်တန်ဆာတွေ ၀တ်ဆင်ပြီးဖောက်ပြန်သွား
ခဲ့ကြတာကိုး -- အဲဒီ လို့D -7 လို လူစားမျိုးတွေ ထပ်ထွက် နေပြီ ဆိုတာ ပါတီ ထဲ က လူငယ်အချင်း
ချင်းသတိထားမိဖို့ ပါပဲ ။။ ငါနေရာရရင် ရ မရရင် ( မင်းသားကြီးမလုပ်ရရင်ပတ်မကြီးထိုးဖောက်တဲ့)
ခင်ထွန်း လို လူစားမျိုးက လူငယ်တွေ ကို ယုံကြည်ချက်သူ့ မှာ တစ်ခုခုရှိနေသယောင် နဲ့ စည်းရုံး
သိမ်းသွင်းနေတာ သတိထားပါ ။ တုန့် ပြန်ပါ ခြေပ ပါ -- ကိုယ့် ကို လာဆွေးနွေးရင် မောင်းကိုထုတ်
ပစ်လိုက်ပါ ။ NLD ပါတီမှာ မျိုးဆက် မပြတ် တိုက်ရဲတဲ့ လူငယ်တွေ ဆက်တိုက်ထွက် ပါတယ် ။။
ကျမ တို့ ထောင်က ထွက် လာတဲ့ ၂၀၀၂ --၂၀၀၃ မှာတော့ ဒီ လူလိမ်တွေဟာ လူငယ်ထိပ်ဆုံးနေရာ
အရယူထားပြီး တိုက်ရဲတဲ့လူငယ်တွေ ကို ထုတ်ပစ်အောင် ဘေးရောက်အောင် စနစ်တကျ ပါတီလူငယ်
တွေ ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ် ။ အမျော်အမြင်ကြီးတဲ့တစ်ချို့ သော လူငယ်တွေ က ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့အ
တွက် ခု ချိန်ထိ ပါတီရဲ့ လူငယ်ဂဏ္ဍ ဟာ မြဲမြန့် ခိုင်မာဆဲပါ ။ကျမ တို့အဆိုးဆုံးတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမယ်
အကောင်းဆုံးတွေ လည်း ရကိုရ ရဦးမယ် ဆိုတာ အားလုံးသိနေပြီးသားပါ ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းကြားမှာ
အထူးသတိထားနိုင်ဖို့ရဲရင့်တက်ကြွပြတ်သားထက်မြတ်တဲ့လူငယ်တွေ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သတိ -- ပါတီကိုစောင့်ရှောက်ကြရန် ဖောက်ပြန်သူများရန်မှ
ဒီလိုပါ ဒီလ ဒီရက်တွေ ကျမ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ပို့ (စ်)အသစ်မတင်နိုင်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေ
လည်းမေး(လ်) နဲ့ ပို့ တယ် ကျမကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာတင်ပေးပါဆိုတော့ ရေးချင်တာမှအရမ်းပါ ။
စိတ်ထဲမှာမတင်မကျ နဲ့ မခြေပလိုက်ရတာလေး ကျမ ရေးပါရစေ ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့ - ကျမ ကို ဘီဘီစီက အမတစ်ယောက်က စကားဝိုင်းတစ်ခု ကို
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။ဘာကိစ္စ ဖြစ်လဲ လို့ကြိုမေးတဲ့အခါ (၆) နိုင်ငံ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးတဲ့---
ကျမ သိုးသိုးသန့် သန့် ကြားနေတာတော့ကြာပါပြီ ဒါ ဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီး ကိုမီဒီယာမှာ ငါ
ဘယ်လိုပြောရပါ့ ပေါ့ -- ကဲ -ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး တကယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့သုံးပွင့်
ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးကို တောင်မလုပ်တဲ့ ဒီစစ်အုပ်စု အနေနဲ့၆ နိုင်ငံ ဆွေးနွေးတော့ကော
ဘာထူးလာမလဲ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နူးကလီးယား ကိုထိမ်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးနဲ့ကိုယ့်တိုင်း
ပြည်အခြေအနေနဲ့တော့တထပ်တည်းတွက်မရဘူး ပေါ့ အဲဒီ့လောက်ပဲ ပြောမယ် လို့ စဉ်းစား
ထားပါတယ် ။ ဘီဘီစီနဲ့ ပြောရတာက စကားဝိုင်း ကိုး အချိန်ကသိတ်တိုတယ် ကျမ အရင်
စင်္ကပူကစီးပွါးရေး လုပ်သူ ဘာညာပေါ့ သူတို့ ဖြေတာတွေ တည့်သည်ဖြစ်စေ မတည့်သည်ဖြစ်
စေသာမာန်ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ကျမ ဘယ်လိုမှ မရှိပါဘူး ။ ကျမကတော့စောစောကတွေး
ထားတဲ့စကားရပ်တွေအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုမလွှတ်
မချင်း ဘယ်လိုတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုး မှ မအောင်မြင်နိုင် မဖြစ် နိုင် ဘူး လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။
တချို့ တချို့ က တော့ တိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲ ကို ကိုယ့်အယူအဆ နဲ့ ကိုယ် ပြောနေတဲ့ ထဲ မှာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မှ လူငယ်ဟောင်း ခင်ထွန်း ဆို တဲ့ အသံကြားတော့ အင်းဒီလူ
ဘာများပြောပေ လိမ့်မလဲ မှတ်တာ ကျနော် တို့ အစိုးရ ဆိုတာတွေထပ် ပြီး ဖားယားနေလိုက်တာ
ပါတီဝင် တွေ ကြားရင် ငါတို့ ပါတီကို တုံးလုပ် ပြီး လူငယ်တာဝန်ယူသွားတဲ့ကောင် ဆိုပြီး ဆဲ မှာ
အမှန်ပါပဲ ကျမဒီလူပြောတာတွေ မှတ်ပြီးပြန်ခြေပ ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ ဘီဘီစီက အချိန်မပေး
နိုင်တော့တဲ့အတွက် စကားဝိုင်း ထဲ စကားမပြတ်ပဲပြီးခဲ့ရတာပါ ။သဘောထားပဲပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မှာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လူငယ်အပေါင်းတို့ဒီသတင်းကိုနားထောင်ပြီး
ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြပေ မဲ့ ကျမ တို့ ဒေါသဖြစ် ရုံနဲ့ မပြီးဘူးဆိုတာတော့ သတင်းပါချင်ပါတယ်။
ဘယ်အဖွဲ့ အစည်း ဘယ် ပါတီ ဘယ်သမဂ္ဂ မှာမဆို အလာမကောင်းသူ ရပ်တည်နေတဲ့ကာလ
မှာလည်းရပ်တည်ချက်ခံယူချက် ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသူ အဖွဲ့ အစည်းတွင်းမှာသွေးခွဲ တက်သူ တက်လူ
လူငယ်တွေကိုနင်းနှိမ်ထားပြီး ခေါင်းဆောင်နားမှာ အနီးကပ်နေခွင့်ရအောင်ချဉ်းကပ်လာသူ အဲဒီ့လို
ပဲခူးတိုင်းက ခင်ထွန်းဆိုတဲ့လူ မျိုးကို ကျမတို့ ပါတီမှာ နောက်ထပ် ပုံစံတူ ထပ်မပေါ်ပေါက်လာဖို့ 
ကာကွယ်ရမှာ အားလုံးတာဝန်ပါပဲ ။ကျမမြန်မာပြည်မှာရှိနေစဉ်ကတည်းက လူငယ်လှုပ်ရှားမှုမှန်
သမျှကို မဖြစ်ပေါ်အောင်စနစ်တကျချိုးနှိမ်ထားခဲ့တာ ဒီလူတွေပါပဲ ခု တော့ မီဒီယာမှာပေါ်ပေါ်
ထင်ထင်ကြီးကို ကျနော်တို့ အစိုးရ ကျနော်တို့ အစိုးရ နဲ့ပေါရဲ ပြောရဲလိုက်ပုံများဖြစ် ဟာသ
တဖြစ် ဒေါသလည်းဖြစ်ချင်စရာမို့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတဲ့ လူငယ်တစ်ချို့ ဟာ ဒီလူတွေရဲ့ ရပ်တည်
ချက်ကို အမှန်တွေထင်ပြီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုတွေ ရပ်တန်းကရပ်သင့်ပါပြီ။ ဒီလူတွေဟာနဂိုထဲ
ကရည်ရွယ်ချက်အမှန်နဲ့ ပါတီမှာလာရပ်သူတွေ မဖြစ်နိုင်တာကိုသဘောပေါက်နားလည်သင့်ပါ
Posted by LRDP at 12:13 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသမဂ္ဂမှ ဦးသိန်းအောင်ကျော် ဦးအောင်သန်းအပါအ၀င်
Posted by LRDP at 11:47 PM0comments Links to this post
ပိတောက်တွေနွေမှာလှိုင် ခမောက်တွေမေမှာနိုင်ခဲ့သလို ရဲဘော်တို့ ရေ
Posted by LRDP at 9:26 AM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဗဟို မှ နှစ်သစ်ကူး အလှူ
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ဘဘဦးတင်ဦးနှင့်တစ်ကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်မြောက်ပါစေ ။။
Posted by LRDP at 10:18 AM0comments Links to this post
FTUB မှ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ပြည်သူသို့ နှတ်ခွန်းဆက် ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 9:47 AM0comments Links to this post
ပြည်သူ့ အသက်အိုးအိမ်တွေ အချိန်မှီကာကွယ်နိုင်သေးတယ် ဗျို့သူများနိုင်ငံတွေ ကယ်ဆယ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီ
နောက်48နာရီအတွင်းရခိုင် မန်းတလေး ရှမ်းပြည်ကို Bijli မုန်တိုင်းoင်ရောက်ပါမည်…..7:38 AM ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ဟာ ၃၆ နာရီအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် လိမ့် မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ကုန်တွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် လျှင် ပြင်အား တနာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် စနေနေ့ မှာင်ရောက်လာ မှာဖြစ်ပြီး၊ တနင်္ဂနွေနေ့ထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် လိမ့်မယ် လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါသည်။ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးဟာ ၁၄ ပေထိ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြတယ်။ ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်ပြီး၊ မြန်မာပြည် ကုန်တွင်းပိုင်းတွေဆီ ထိပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခတ်လိမ့်မယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မိုးလေ၀သ ပညာရှင်တွေ ကို တွက်ဆ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ မိုးလေ၀သဌာနက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ကမ်းခြေတလျောက်တွင်ရှိသော ငါးဖမ်း သင်္ဘောများ၊ ကုန်တင် သ င်္ဘောများ၊ လူများကို သတိပေးထားပြီး၊ လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေ ရွေ့ပြောင်းကြဖို့ ပြင်ထန်းစွာ သတိပေးထားပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း တွေအတွက် စေတနာဖြင့် ကူညီပေးမဲ့လူပေါင်း ၄၃,၀၀၀ ကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ ဟာ လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းရွေှ့ဖို့ အခက်အခဲရှိနေကြသူတွေကို အလျင်အမြန် သွားရောက်နေ ရာချထားပေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်။
မြန်မာပြည်ရှိ မုန်တိုင်းစက်ကွင်းဒေသများတွင်နေထိုင်နေကြသော ပြည်သူများကို အမြန်ဆုံး ထိရောက်စွာ အကြောင်းကြား နှိုးဆော်ပေး ကြဖို့ ကျနော်တို့ We Fight We Win မှ စာဖတ်သူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
* (၁)။ ထိုနေ့မှစ၍ ကမ်းနီးကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များအားလုံး ရပ်နားထားကြရန်။
* (၂)။ ထိုနေ့မှစ၍ ကုန်တင်သင်္ဘောများ၊ ခရီးတင်သင်္ဘောများနှင့်စက်တတ်ရေယာဉ်နှင့် ရေယာဉ်ငယ်အားလုံး ရပ်နားထားကြရန်။
* (၃)။ မိမိတို့ရေယာဉ်များအားလုံးကို မုန်တိုင်းလွတ်ရာနေရာများသို့ ပြောင်းရွေ့ထားကြရန်။
* (၄)။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးသူငယ်များကို မုန်တိုင်းဒီရေလွတ်သောနေရာနှင့် လုံခြုံမှုရှိသောနေရာများသို့ အခုကတည်းက ရွေ့ပြောင်းထားရှိကြရန်။
* (၅)။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းအားလုံး အဆင်သင့်အနေအထားတွင် ထားရှိကြရန်။
* (၆)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း ပြိုလဲရန်လွယ်ကူသော အိမ်များ၊ သစ်ပင်ကြီးများအောက်တွင် မနေကြရန်။
* (၇)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း အကြောက်မလွန်ကြရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသူများကို ကြိုးစားပြီးကယ်တင်ပေးကြရန်။
* (ဂ)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်မဟာလိုင်း၊ ရိုရိုးဓါတ်အားလိုင်းများအားလုံး ပိတ်ထားကြရန်။ မလိုအပ်ပဲ ဓါတ်တိုင်များအောက်သို့ မသွားရောက်ကျရန်။ ပြတ်ကျနေသောဓါတ်ကြိုးများကို သွားရောက်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုကြရန်။
* (၉)။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကို ပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် အကြိမ်ကြိမ် အထူးသတင်းအဖြစ် သတိပေးကြေညာပေးရန် လိုအပ်သည်။
* (၁၀)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း မလိုအပ်ပဲအပြင်သို့ လုံးဝမထွက်ကြရန်။
www.yamgon.tk ရန်ကုန် နတ်
စစ်အုပ်စုမှ မုန်းတိုင်းသတိပေးခြင်းထက် ပိုတဲ့ ကယ်ဆယ်နေရာချထားရေးတွေ ပို လုပ်သင့်ကြောင့် (ရခိုင် ကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျောက်၇ှိပြည်သူများအတွက်)
ကျမ တို့မြန်မာ့နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာအားလုံးကိုပြုံးပျော်ရွင်မြူးတာမြင်ချင်
ကြားချင်ပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာ မုန်းတိုင်း တစ်ခု သတင်းကြောင့် ကျမရင်ထဲ အင်မတန် မှ ကိုပဲ
စိုးရိမ်နေမိပါတယ် ။အဓိကအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်က သွေးချင်းတွေပို သတိထားနိုင်ဖို့ အချင်း
ချင်း ဆက်သွယ် အသိပေးကြဖို့လိုနေပါပြီ။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော် (ဘစ်ဂ်ျလီိ)ဟုခေါ်သော်
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းသည် ၁၈-၄-၂၀၀၉ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်း၇ိုးတမ်းဒေသသို့ဖြတ်၍
တိုက်ခိုက် နိုင်သည်ဟု သိရသည်။
မုန်တိုင်း သည် စိုးရိမ်ရသော် အခြေအနေ ရှိသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း
ကုန်းတွင်းပိုင်း ကိုလောလေဆယ်ဦးတည်နေသဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများအား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ
ပိုင် စိုးထားသော စစ်အုပ်စု အနေနှင့် ပြည်သူများအား အသက်ဘေးလွှတ်ရာသို့လိုရမယ်ရ
ကြိုတင်ရွှေ့ ပြောင်းထားပေးသင့်သည်။ ရွှေ့ ပြောင်းစရိတ်နှင့် နေစရာ စားစရာများကိုလည်း
ယနေ့ အထိ မြန်မာပြည်သူများ နာဂစ် ဒုက္ခ ဘေးမှ ဒုက္ခတွေ မငြိမ်းအေး နိုင်သေးပါ နောက်
ထပ်တစ်ခါ ဤသို့ သောအခြေအနေဆိုးများမဖြစ်ပေါ်စေရန် န-အ-ဖ တွင် တာဝန်ရှိ သည်။
အမြန်ဆုံး ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးရန် အထူး
တိုက်တွန်း ပါသည်။ ပြည်သူလူထု မှလည်း ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့သော ဒုက္ခ ကို သင်္ခန်းစား ယူပြီး
မုန်တိုင်းလွတ်နိုင်ရာဒေသများသို့ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာတိုက်တွန်းအပ်ပါ
ပြည်သူလူထုကိုချစ်သော စေနာနာဖြင့် စိုး၇ိမ်ကြီးစွာ
Posted by LRDP at 8:35 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 1:54 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:37 PM0comments Links to this post
JTUC မှ ဖမ်းဆီးထားသော FTUB အဖွဲ့ ဝင်များအားပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
Posted by LRDP at 4:52 AM0comments Links to this post
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများမှ ဖမ်းဆီခံထားရသော FTUB အဖွဲ့ ဝင်များအားလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
HOME CONTRIBUTE CONTACT US
Solidarity Center Condemns Arrests of Burmese Union Members Print page E-mail toafriend
The Solidarity Center joined the global labor movement in condemning the April 1, 2009, arrests of five members of the Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) by the Burmese military junta on their return home from border areas, where the first national FTUB Congress was held.
FTUB General Secretary U Maung Maung deplored the recent arrests of five FTUB members who had attended the first national FTUB Congress.
No charges have been announced in the arrests. According toastatement by the FTUB, the delegates are likely being held in interrogation centers in the Rangoon area, and FTUB spokespersons believe that they may be being tortured.
“These arrests are clearly unlawful and violate international human rights standards that the Burmese government has ratified,” said Solidarity Center Executive Director Ellie Larson inapress release. “They are an insult to the global trade union movement and to workers everywhere.”
The five delegates have served as non-violent advocates and campaigners for worker rights and better wages and working conditions for workers inside Burma. A key feature of the Congress was the reaffirmation of the FTUB’s commitment to an end to military rule and the introduction of democracy in Burma. Union representatives from Southeast Asia, Asia-Pacific countries, Europe, and North America attended the historic Congress.
Arrested were U Zaw Myint Aung,ateacher; U Soe Oo, Maung Tun Nyein, and Khine Lin Myat, all textile factory workers; and Shwe Y Nyunt,anurse’s aide and law student who is alsoamember of the FTUB Women’s Committee. In addition,anumber of family members were also arrested, threatened, and put under pressure to compel cooperation from the five detained FTUB members.
“We join the International Trade Union Confederation, the global labor movement, and the FTUB in condemning the arrests of these brave trade unionists,” said Larson. “Workers must be allowed to exercise their right to freedom of association.”
Read the Solidarity Center press release
Read the FTUB Statement on Unlawful Detention
Posted by LRDP at 12:11 AM0comments Links to this post
AFL-CIO မှ ဖမ်းဆီးခံသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝင်များနှင့်ပတ်သတ်၍
Solidarity Center Condemns Arrests of Burmese Union Members
The AFL-CIO’s Solidarity Center and the global union movement are condemning the April 1 arrests of five members of the Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) by the Burmese military junta. The union members were arrested as they returned home from the first national FTUB Congress.
No charges have been announced in the arrests. According toastatement by the FTUB, the delegates are likely being held in interrogation centers in the Rangoon area, and FTUB spokespersons believe they may be being tortured.
Solidarity Center Director Ellie Larson says:
These arrests are clearly unlawful and violate international human rights standards that the Burmese government has ratified. They are an insult to the global trade union movement and to workers everywhere.
The five union members served as nonviolent advocates and campaigners for workers’ rights and better wages and working conditions for workers in Burma. A key feature of the Congress was the reaffirmation of the FTUB’s commitment to ending military rule and the introduction of democracy in Burma. Union representatives from Southeast Asia, Asia-Pacific countries, Europe and North America attended the historic Congress.
The five persons under arrest include U Zaw Myint Aung,ateacher; U Soe Oo, Maung Tun Nyein and Khine Lin Myat, all textile factory workers; and Shwe Y Nyunt,anurses aide and law student who is alsoamember of the FTUB Women’s Committee. In addition,anumber of family members were arrested, threatened and put under pressure to compel cooperation from the five detainees.
“We join the International Trade Union Confederation, the International Labor Organization and the FTUB in condemning the arrests of these brave trade unionists,” Larson says.
Workers must be allowed to exercise their right to freedom of association.
This isacrosspost from the Solidarity Center websid
Posted by LRDP at 11:37 PM0comments Links to this post
ITUC မှဖမ်းဆီး ထားသောFTUB အဖွဲ့ ဝင်များအားလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ မှ ဖမ်းဆီးထားသော FTUB အဖွဲ့ ဝင်များအားလွှတ်ပေးရန်ကြေညာချက်
Posted by LRDP at 1:38 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်အဖွဲ့ ဝင်များဖမ်းဆီးခံရခြင်း
Posted by LRDP at 10:53 PM0comments Links to this post
Burmese military regime arrests trade union members in Burma:
Posted by LRDP at 9:57 PM0comments Links to this post
Burmese military regime arrests trade union members in Burma
Burmese military regime arrests trade union members in Burma: FTUB unlawfully detained, likely tortured
1. U Zaw Myint Aung, U Soe Oo, Maung Tun Nyein, Ma Khine Lin Myat, Ma Shwe Yi Nyunt must be released immediately and unconditionally.
2. The SPDC authorities must immediately cease intimidating, detaining and threatening the family members of these FTUB members.
3. The SPDC must strictly abide by the ILO Convention 87 of the International Labour Organization on Freedom of Association, which Burma has ratifed.
4. The SPDC must denounce the actions of the authorities involved arresting our members, and immediately order an end to all actions to prevent workers from forming trade unions and exercising their workers’ rights in Burma.
U Maung Maung, the General Secretary of the FTUB, said today that “Burma has ratified ILO Convention number 87 on Freedom of Association, the military SPDC government is obliged by international law to respect and abide by this Convention. The fact that our members were arrested just after returning from participating in the 1st National Congress of the FTUB, which is recognized by the international labour
movement as the legitimate national labour center of Burma, shows just how little regard Burma’s generals have for human rights, labour rights, and the international agreements they ratify.”
Posted by LRDP at 8:02 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 11:26 PM0comments Links to this post
ကလစ်ထောက်၍ အကျယ်ချဲ့ဖတ်နိုင်ပါသည် ။
Posted by LRDP at 2:33 AM0comments Links to this post